Indlela ukukhetha centrifugal spray dryer kahle? - China Changzhou Daming Pharmaceutical Izinsiza kusebenza
Indlela ukukhetha centrifugal spray dryer kahle?
Noma ubani oye wachitha wasebenzisa leli imishini kumele bazi ukuthi centrifugal spray dryer bangadlala indima enamandla emsebenzini, izinga omiswe kuyashesha kakhulu, futhi kungaba ikhwalithi imikhiqizo, ngokuvamile elisetshenziswa ukushisa ebucayi ukwelashwa izidakamizwa omiswe. Ngaphezu kwalokho, umshini wokomisa spray lungasetshenziswa ukulungiselela microcapsules, futhi kungaba sifinyelele nomphumela omuhle ukwelashwa. Ngakho kanjani sikhetha?
Okokuqala, lapho enza izinqumo, zui njalo uqhathanisa izinhlobo eziningana ezahlukene amadivaysi. Kubalulekile khumbula ukuthi umkhethe labo amadivayisi ukuhlangabezana nezidingo zakho, okuyinto bantekenteke ngaphezulu isakhiwo futhi zidinga isikhala umsebenzi ofanayo ngaphansi.
Inkinga yesibili, ngenkathi siyakucela ethenga spray dryers, wukuthi zui is kangcono ngifuna kumadivayisi ngokuzenzakalela ngokwengeziwe futhi kube lula ukulawula. Ngale ndlela, kuyoba esikahle futhi ezilula ukusebenza, okuyinto kunganciphisa inani opharetha bese ugcine izindleko.
Okwesithathu, kufanele ukhethe imishini nge ukusebenza onokwethenjelwa futhi uzinzile, ngaphansi kwamandla kanye nekghono ephakeme, ukuze sikwazi ukusiza kithi uzowuqeda umsebenzi.
Okwesine, abasebenzisi kumele kuqala ukucacisa izidingo zabo zangempela, kanye izinto ezithile futhi izakhiwo ezibonakalayo, futhi uqinisekise ukuthi ubukhulu umlomo wombhobho imishini akhethiwe iyahlangabezana nezidingo. Okungukuthi, kufanele ukhethe spray dryer imishini engasisiza ukuphothula umsebenzi kahle.
Nokho, ngisho noma imishini ezifanele ekhethiwe, kungenzeka kube nabathile izinkinga isicelo langempela. Ngalesi sikhathi, kudingeka sicabangele ukuthi ukushona dryer spray has izinkinga, njengokuthi noma ngabe i ijubane yokudla, izinga lokushisa kulungiselelwa ngokusesilinganisweni, futhi izici impahla uqobo, njll, bese uphinda uyayinyakazisa
isikhathi Iposi: Aug-08-2018